Raxab Yehowah Bay Aammintay | Carruurtaada Wax Bar
Raxab Yehowah Bay Aammintay
Ka feker innagoo joogna magaaladii hore ee Yerixoo. Dalka Kancaan bay magaaladan ku taalla dadka joogaana Yehowah ma aamminsanaa. Meeshan waxaa deggan naag Raxab la dhaho.
Markay Raxab gabadh yaraa ahayd waxay maqashay sheekooyinkii nebi Muuse siduu Badda Cas u kala gooyay oo reer binu Israaʼiil Masar uga saaray. Waxayna maqashay siduu Yehowah dagaalladii cadowyadoodii uga liibaaniyay. Laakiin hadda waxay maqashay inay reer binu Israaʼiil Yerixoo soo ag degeen!
Raxab Yehowah rumaysadkay u qabtay aawadiis bay sirdoonyadii u qarisay
Fiidkii Raxab gurigeeda waxaa yimid laba nin. Nimankan waa niman sirdoon ah oo reer binu Israaʼiil ka dhashay. Waxay u yimaaddeen inay magaalada basaasaan. Raxab nimankan gurigeeday ku soo dhoweysaa inay la joogaan. Caawadii boqorkii Yerixoo baa ogaaday inay sirdoonyada magaalada joogaan oo Raxab u tegeen. Niman buu ka dabadiraa inay soo xiraan. Raxab gurigeeda dushiisa bay sirdoonyadii ku qarisay. Boqorkiina nimankiisii waxay ku tiri: ‘Nimankii way ii yimaaddeen laakiin magaalada way ka baxeen. Haddaba haddaad dhaqsi uga daba tagtaan waad gaari karaysaan!’ Bal maxay Raxab u qarinaysaa sirdoonyada?— Yehowah bay rumaysataa wayna ogtahay inuu reer binu Israaʼiil siin doono dhulka Kancaan.
Sirdoonyada intaynan Raxab gurigeeda ka bixin wax bay u ballanqaadeen. Waxay ku yiraahdeen marka Yerixoo la baabbiʼiyo inay iyada iyo reerkeedaba badbaadi doonaan. Ma taqaannaa waxay u sheegaan inay sameyso?— Waxay ku dhahaan: ‘Xadhiggan guduudan qaado oo daaqaddaada ku xir. Haddii ad sidan yeeshid dadka gurigaaga ku jiro oo dhan way badbaadi doonaan.’ Raxab siday u sheegeen bay yeeshaa. Ma taqaannaa kaddib waxa dhaco?—
Raxab iyo reerkeediiba Yehowah baa badbaadiyay
Dhowr maalmood kaddib nimankii dagaal yaqaanka ahaa oo dhan oo reer binu Israaʼiil baa magaalada ku wareegay iyagoo aammusan. Maalin walba hal jeer bay magaalada ku wareegayeen. Maalintii toddobaad markii la gaaray toddoba jeer bay magaalada ku soo wareegeen. Markaana kulligood qaylo dheer bay ku qayliyaan. Kaddibna Yehowah baa awooddiisa ku soo dumiyo derbiyada magaalada. Laakiin guriga dunta guduudan ay ka laallaado baa soo haray! Sawirka ma ka aragtaa?— Way badbaadaan Raxab iyo reerkeediiba!
Raxab maxaad ka baran kartaa?— Waxyaalaha cajaaʼibka ah ay Yehowah ka baratay aawadood bay Raxab Yehowah u rumaysatay. Adiguna Yehowah waxyaalo badan oo cajaaʼib ah baad ka baranaysaa. Raxab siday Yehowah u aammintay adiguna maad u aamminsan tahay?— Waan hubnaa inaad u aammintid!
Yashuuca 2:1-24; 6:1-5, 14, 15, 20-25
Raxab markay gabadh yar ahayd sheekooyinkee bay maqashay?
Sidee bay sirdoonyadii u caawisay? Maxayna u caawisay?
Sirdoonyadii maxay Raxab ka ballanqaadeen?
Raxab maxaad ka baran kartaa?
Wadaag Wadaag Raxab Yehowah Bay Aammintay